Pet Cages no mafana amin'ny CE China Manufacturer
Description:Pet Cages Heat Mat sy CE,Hevitra Hamaky ny tohiny ...,Ny sarin'ny hafanana amin'ny CEE ny CEE
Home > Products > Reptile Heat Pad > Under Tank Pad > Pet Cages no mafana amin&#39;ny CE
Ny fitaovana fanamafisam-peo vaovao dia iray amin'ireo fitaovana tena mahomby sy azo antoka ho an'ny fahasalamana ho an'ny reptile sy ny amphibia. Ny raibeny sy ny amphibians dia mangatsiaka ary ao amin'ny toeram-ponenany voajanahary matetika no ampiasain'ny masoandro amin'ny hafanana. Ny Reptilia dia fitaovana fampiasan'ny terrarium izay mampivelatra ireo habaka manjelatra ny masoandro. Izy ireo dia tsara kokoa ny loharanom-pahasalamana 24 ora ho an'ny karazana biby an-tapitrisany sy amphibiana ary ilaina indrindra ho loharano hafanana mandritra ny alina ho an'ny karazam-borona maro. Ny fonon-kodiaran-tsimok'aretina mipetaka an-kibon-dranomandry dia mety hifikitra hatrany amin'ny terrarium, mamorona fatorana matanjaka ho an'ny famindrana hafanana tsara.Durable.flexible.waterproof. Ny fananganana anti-kovety sy ny fanamafisana ny harena dia mitarika ho amin'ny fiainana serivisy lava. Tena azo antoka tanteraka. Ny serivisy OEM dia misy. Ny vokatra antsika dia natao ihany koa mba hifanaraka amin'ny fenitra CE, RoHS, Ul, ETL.
Raha mampiasa ny hafanana biby fiompy biby fiompy ho an'ny biby an-trano na ny biby mandady, dia zava-dehibe ny tsy hametrahana azy ao amin'ny tranon'ny tantaram-biby na latabatra.
Ny menaka dia mila mipetraka eo amin'ny rindrin'ny tranombakoka miaina na sora-baventy mba tsy hipetrahan'ny sokatra eny an-tsaha
Pet Cages Heat Mat sy CE Hevitra Hamaky ny tohiny ... Ny sarin'ny hafanana amin'ny CEE ny CEE Pet Cages Heat Mat Pet PTC Heat Mat sy UL Pets Heating Mat sy UL Ice Melting Heat Mat sy CE PET Cages PVC Heat Mat